नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : ‘धिक्कार’ मेरा सन्तान–दरसन्तान इन्स्योरेन्स एजेन्ट नबनुन् ! - शिव प्रकाश
‘धिक्कार’ मेरा सन्तान–दरसन्तान इन्स्योरेन्स एजेन्ट नबनुन् ! - शिव प्रकाश
जीवन बीमाः ठगी कि जीवनोपयोगी ? - मिलनकुमार शाही
बोस्टनका एक मित्रले इन्स्योरेन्समा आफू ठगिएको दुःखेसो पोख्दै भने– मेरा सन्तान–दरसन्तान इन्स्योरेन्स एजेन्ट नबनुन् ! इन्स्योरेन्सको प्रसंगलाई पुनः जोड्ने छु । यसअघि म किन ‘धिक्कार’ लेख्दै छु ? आफैंमा उब्जिएको यो प्रश्नको जवाफ पनि आफैं दिदै छु ।
‘धिक्कार’ शिर्षक राखेर यसअघि एउटा लेखेको थिएँ । अन्य शिर्षकामा जोडेर थप केही लेखहरु पनि लेखेँ । जसलाई अग्रज तथा पाठकमित्रहरुले रुचाइदिनु भो । खुसी लाग्यो ।
यो शिर्षकमा केही लेखेपछि ‘धिक्कार’लाई अभियानका रुपमा चलाउनु पर्ने सुझाव पुराना पत्रकार तथा लेखक रमेश शर्माले दिनुभयो । यसबारेमा हामीबीच चर्चापरिचर्चा अझै चलिरेको छ ।
एउटा थोत्रो मित्र राजेश मिश्र, जो दशक अगाडिसम्म पत्रकारिता र लेखनमा सक्रिय थियो । खासमा सक्रिय मात्र थिएन, एक कलमबाजका रुपमा थियो । नेपालका थोरै पत्रकार र लेखकमध्ये निर्भिक र इमान्दार मानिन्थ्यो, मेरो नजरमा । तिनै थोरै पत्रकार र लेखक मध्ये उसको कलमको निभ मलाई धारिलो तरबारको तीखो टुप्पो जस्तो लाग्थ्यो, यद्यपि लाग्छ । साँध लगाउँन नछोड्नु है राजेश ।
पत्रपत्रिकामा तरबारको तीखो टुप्पोले कोरेका उसका शब्दहरुको पाठक
थिएँ, म । यद्यपि छु ।
किन ‘धिक्कार’ लेख्दै छु ? आफैंमा उब्जिएको यो प्रश्नको जवाफ पनि आफैं दिदै छु । ‘धिक्कार’ शिर्षक राखेर यसअघि एउटा लेखेको थिएँ । अन्य शिर्षकामा जोडेर थप केही लेखहरु पनि लेखेँ । जसलाई अग्रज तथा पाठकमित्रहरुले रुचाइदिनु भो । खुसी लाग्यो । यो शिर्षकमा केही लेखेपछि ‘धिक्कार’लाई अभियानका रुपमा चलाउनु पर्ने सुझाव पुराना पत्रकार तथा लेखक रमेश शर्माले दिनुभयो । यसबारेमा हामीबीच चर्चापरिचर्चा अझै चलिरेको छ ।
निष्ठाको बाटो हो, पत्रकारिता र लेखन । राजनीति जस्तो सेवा हैन तर पेशा हो । जसलाई व्यवासाय पनि भन्न सकिन्छ तर व्यपार हैन । धिक्कार भन्नै पर्छ, यस्तो पवित्र पेशालाई पनि कतिले व्यापार बनाएका छन् ।
सेवा ठानिएको राजनीतिको कुरा नगरे हुन्छ । नेपालमा राजनीति व्यवासाय, व्यवसायभन्दा बढी व्यापार र व्यापारभन्दा बढी कालाबजारीको पर्याय भएको छ । लेख्नु र धिक्कार भन्नु बाहेक यिनका लागि हामीले गर्ने दवाई अरु केही छैन । हाम्रो दवाईले कहिल्यै छुदैन, तै पनि हामी गरिरहेका छौं । राजनीतिमा कालाबजारी व्यापार बढ्दो छ, धिक्कार !
पत्रकारिता र लेखनलाई पनि व्यापार बनाउने धेरै छन् । अमेरिकामा जीवन विमाका नाउँमा नेपालीले नेपालीलाई डरलाग्दो किसिमले ठगी गरेर बदनाम् भएजस्तो पत्रकारिता र लेखनका नाउँमा बदनाम भएका कथितहरुको पनि कमी छैन । कुन स्तरका छन् ती कथितहरु धेरै पठाकलाई थाह नै छ । कथिहरुप्रति पनि धिक्कार भन्नु बाहेक केही छैन ।
एउटा कुरामा विश्वस्त छु– मान्छे जे हो त्यही नै हो, सुध्रिए जस्तो देखिन्छ तर असल मान्छे सुध्रिन जरुरत नै छैन । खराब कहिल्यै सुध्रिदैन । खराबले अन्ततः खराबै परिणाम दिन्छ । जिउँदो उदाहरण हो, अमेरिकामा ‘मृत्यु विमा’ प्रकम्प ! धिक्कार !
मेरो विश्वासले भन्छ, राजेश पत्रकारितालाई व्यवसाय बनाउन चाहन्छ तर व्यपार हैन । उनको स्वभाव र आचरण व्यपार गर्ने खालको छैन । स्पष्ट र निर्भिक मान्छेले व्यापार गर्न जान्दैन । सक्दैन । व्यापारमा दलाली चाहिन्छ । त्यस्ता टेढाले के दलाली गर्नु ?
बल्ल बुझ्दै छु, जसले धेरै चिल्लो घस्दैन, त्यसले सायद कहिल्यै चिप्ल्याउँदैन ।
राजेश र मेरो एकदुई स्वाभावमा एकरुपता देखेको छु । ऊ पनि मभन्दा कम खस्रो छैन । म जस्तै अमेरिकामा धेरै वर्ष शितनिद्रामा बसेपछि अहिले जागेको छ । लेख्न थालेको छ । लेखनसँगै पर्लस्ट्रिट जर्नल (pearlstjournal.com), नेपाली र अँग्रेजी दुबै भाषामा प्रकाशित हुने यो पोर्टल संचालनमा ल्याएको छ । लेख्ने मान्छे न हो, चुपचाप बस्न सक्दैन । विषय र बस्तुहरुले चिमोट्छन् ।
मित्रताको सम्बन्धले यो पोर्टलसँग मलाई पनि जोड्यो । समय–समयमा ‘धिक्कार’ स्तम्भ अन्र्तगत केही लेख्ने बाचा मित्रसँग गरेको छु । भित्री मनले गरेको छु, मित्रप्रति विश्वास गरेर गरेको छु ।
भन्न त बोस्टनका एक मित्रले भनेका थिए, मान्छेसँग मित्रता र सम्बन्ध भित्री मनले गाँस्ने नै हैन । त्यो दिन झल्याँस्स भए, ती मित्रले पनि मसँग कस्तो सम्बन्ध राखेका रहेछन् ? जसलाई भित्रैदेखि विश्वास गर्थे । कमजोरी नै भन्नु प¥यो, मन र बोली कहिल्यै फरक बनाउँन सकिन । प्रयास गर्छु हुदैन । मनमा जे छ मुहारमा झल्कीहाल्छ, टर्रो स्वाद घोलिएको बोली फुटिहाल्छ, हुनु कसरी ? कुटिलता मसँग ‘फिट’ नहुने शब्द भएको छ, अहिलेसम्म ।
जीवन विमा भनेर बेचेका ती बस्तु जुन किन्नका लागि हैन, बेच्नका लागि मात्र बनाएका रहेछन्, तिनैलाई मैले ‘मृत्यु विमा’ नामाकरण गरेको छु । ‘मृत्यु विमा’ जसले किनेका छन् तिनले गुमाउनु बाहेक जीवनभर पाउने केही छैन । विमाले तोकेको वर्ष, दिन र समयभित्र मृत्यु भयो भने हकवालाले केही पाउन सक्छ । त्यो पनि तोकिएको दिन र समयभित्रै मृत्यु नभए सबै गुम्छ । केही पाउन विमाको ‘स्क्याजुएल’ अनुसार मर्नु पर्ने भएकोले ‘मृत्यु विमा’ भनेको हुँ
जे होस्, अमेरिकाका नेपालीमित्रले, नेपालीमित्र र आफन्तलाई विश्वास गरेर ‘जीवन विमा’ नाउँका ‘मृत्यु विमा’को किनबेच जस्तो हुनेछैन हाम्रो समन्ध भन्ने विश्वास छ ।
मित्रतामा कति शक्ति हुन्छ ? हामी देखाउँन सकूँ । मित्रले मित्रसँग ‘मृत्यु बिमा’ किनेर पछुताए जस्तो हामीले पछुताउनु पर्ने छैन भन्ने विश्वास पनि छ । एकले अर्कालाई ‘धिक्कार’ भन्नु पर्ने छैन भन्ने विश्वास झन् बलियो छ । ‘धिक्कार’ स्तम्भमा लेखिरहने छु भन्ने भित्री विश्वासले जितेको छ ।
‘धिक्कार’ स्तम्भ अन्तर्गतको लेखन कतै व्यङ्ग्यात्मक, कतै मूर्त–अमूर्त शैलीमा हुने छ । ‘घागी’मा कथाहरु ‘प्रयोग’ गरिए जस्तै यो स्तम्भ लेखनमा ‘नयाँ प्रयोग’ हुन सक्छ । धिक्कार भन्न लायकका आफ्ना भोगाई र जीवनका रङ्गहरुलाई उतार्ने प्रयत्न गर्ने छु । चित्त नबुझेका र असंगत कामकुरालाई ‘धिक्कार’ भन्छु, चित्त बुझाउँछु ।
भोगाईको मेसोमा अहिले अमेरिकाको नेपाली समाजमा छाएको विमा आतङ्क छ । जीवन विमा भनेर बेचेका ती बस्तु जुन किन्नका लागि हैन, बेच्नका लागि मात्र बनाएका रहेछन्, तिनैलाई मैले ‘मृत्यु विमा’ नामाकरण गरेको छु ।
‘मृत्यु विमा’ जसले किनेका छन् तिनले गुमाउनु बाहेक जीवनभर पाउने केही छैन । विमाले तोकेको वर्ष, दिन र समयभित्र मृत्यु भयो भने हकवालाले केही पाउन सक्छ । त्यो पनि तोकिएको दिन र समयभित्रै मृत्यु नभए सबै गुम्छ । केही पाउन विमाको ‘स्क्याजुएल’ अनुसार मर्नु पर्ने भएकोले ‘मृत्यु विमा’ भनेको हुँ ।
संसारका सबै बस्तु, सबै पशु र सबै मान्छे खराब छैनन् । हामी सुनेको भरमा असल र खराब छुट्याउँछौं जुन आफैंमा खराब हो । त्यो खराब कमजोरी हामी सबैमा हुन्छ नै प्रायः ।
मित्रलाई भने, त्यसैको सिकार हुन भो, खराबका फेला पर्नु भो ।
म बचेँ ! नत्र म पनि फस्ने थिएँ, मित्रताको माखेसाङ्लो नतोडेको भए । नाई भन्न सायद सक्दिनथे । नसक्नुको कारण हुन्थ्यो– भित्री मनले मित्र ठान्नु र विश्वास गर्नु । मन र मुख फरक पार्न आफूले नजान्नु । अरुले पारेको नबुझ्नु ।
मित्रताको माखेसाङ्लोमा फसेका मित्रहरु अहिले ‘मृत्यु विमा’को गहिरो कुवामा फसेका छन् । निस्कन गाह्रो भएको छ ।
मित्रहरु, मान्छे सबैभन्दा बढी दाह्रा र नङ्ग्रा भएका पशुसँग डराउँछ तर अहिले चर्चामा आएको विमा आतंकले मान्छेसँगै मान्छे सबैभन्दा बढी डराउनु पर्ने देखाएको छ ।
इन्स्योरेन्स स्क्याण्डलका बारेमा धेरै लेख्दिन, लेखिसकेको छु । किन लेखेँ भन्ने कुरा पनि लेखिसकेको छु । लेखक–पत्रकारले बाटो देखाउन सक्छ तर डो¥याएर हिड्न सक्दैन । तै पनि केही प्रश्न उब्जिएका छन्– के सबै इन्स्योरेन्स खराब हुन्छन् ? के सबै एजेन्ट पनि उस्तै खराब हुन्छन ? के इन्स्योरेन्स ऐजेन्ट भनेको दलाल हो ? ठग हो ?
अमेरिकामा जीवन विमाका नाउँमा नेपालीले नेपालीलाई डरलाग्दो किसिमले ठगी गरेर बदनाम् भएजस्तो पत्रकारिता र लेखनका नाउँमा बदनाम भएका कथितहरुको पनि कमी छैन । कुन स्तरका छन् ती कथितहरु धेरै पठाकलाई थाह नै छ । कथिहरुप्रति पनि धिक्कार भन्नु बाहेक केही छैन ।
पक्कै होइन, तर पनि यी प्रश्नले सामुहिक उत्तर खोजेका छन् । पेशालाई मर्यादित बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढेको छ । यो जिम्मेवारी व्यक्तिगत मात्र हैन, सामाजिक पनि हो ।
कुनै पनि पेशा आफैमा खराब हुदैन । यदि खराब छ भने त्यो पेशा हुदैन । त्यो पेशा, जुन पेशाले अर्काको आत्मा रुवाएर आफूलाई खुसी बनाउँछ, त्यो पेशा हुदैन । त्यो पेशा, जुन पेशाले अर्काको गाँस खोसेर आफ्नो मुख मिठ्याइदिन्छ, त्यो पनि पेशा हुदैन । त्यो पेशा, जुन पेशाले अर्काको कपास लुछेर आफू सिँगारिदिन्छ, त्यो पनि पेशा हुदैन । नेपालको ‘हर्वो’ जस्तो धन्धा हुन्छ ।
पेशागत धर्मको सीमान्त रेखा पार ग¥यो भने जुनसुकै पेशा पनि धन्धामा परिणत हुन्छ । त्यतिबेला त्यो धन्धा हुन्छ, जब कसैले मित्रता तथा सामुदायिक साइनो र नाता जोडर अमेरिका जस्तो ठाउँमा जीवन विमाका नाउँमा ‘मृत्यु विमा’ बेचेर रातारात धनी बन्ने र सुखसयलमा बाच्ने सपना बुन्छ ।
मित्रहरु, लेख्दा हामीले जति जिम्मेवार भएर लेख्नु पर्ने हुन्छ, त्योभन्दा बढी जिम्मेवार हरेक पेशाका व्यक्तिले हुन जरुरी छ । नहुदा सम्पूर्ण पेशाप्रति नै घृणा र शङ्का पैदा हुन सक्छ, जसरी अहिले अमेरिकाको नेपाली र भुटानी शरणार्थी समुहमा बेचिएका विमाले पैदा गरेको छ ।
मेरा सन्तान–दरसन्तन विमा एजेन्ट नबनुन् भन्ने अवस्थमा पुगेको यो ‘मत्यु विमा’ प्रकरणका बारेमा ‘धिक्कार’ भन्नु बाहेक अब मसँग अरु कुनै शब्द छैनन् - http://www.pearlstjournal.com/np/?p=9715
(सन् २००८ तिर बोस्टनको चीसोमा शिवप्रकाश र मेरो लेखन र लेखकीय धर्मबारे तात्तातो बहस हुन्थ्यो, प्रत्येक दिन। ती सबै संग्रह गरेको भए शिवप्रकाशको “घाघी” भन्दा धेरै पहिले एउटा अर्कै पुस्तक प्रकाशित भैसक्नेथियो। तर हामी पछि आफ्नो बाटो लाग्यौं। अहिले समयक्रमले हाम्रो फेरि भेट भएको छ, कहिले उ लेखक, म पाठक, कहिले म लेखक, उ समालोचक। “ठुला ठुला कुरा लेखेर काम छैन, आम जनतालाई चाखलाग्दो तरिकाले झक्झ्क्याउन सके पुग्छ,” उसको सदाबहार बाणी हो यो। झर्रो मान्छेको टर्रो लेखन। )
-राजेश मिश्र (सम्पादक)
Did you read Shiva Prakash's "Ghagi ?"
- मिलनकुमार शाही
हरेक कुरामा एकता जरुरी छ, नेपालीको एकता हरेक बाधा, अड्चन छिचोल्न सफल रहेको विगतमा पनि प्रमाणित भइसकेको छ । आउनुहोस् जातजाति, गुट–उपगुट तथा राजनीतिमा विभाजित नभई केवल नेपाली भनेर चिनौं र चिनाऔं । आऔं सबै मिली एकै स्वरमा भनौं– नेपाली एकता जिन्दावाद ! - http://vishwanews.com/MenuPages/content/details.aspx?cat=20&news_id=10387
कम्बल ओढेर घिउ खान पल्केका केही इन्स्योरेन्स एजेन्टहरुको कम्बल अहिले हावाले उढाइदिएको छ । कम्बल उढिसके पछी थाहा छैन उनिहरु अब के ले आफ्नो मुख छोपेर घिउ खाने हुन - इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनालको यो भनाइ कम घतलाग्दो र रहस्यमय छैन ।
इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनालले यि टिप्सहरु दिनुभएको इन्स्योरेन्स लिएका ग्राहकलाई : अमेरिकामा इन्स्योरेन्स ठगी प्रकरण र यस बिरुद्धको जनचेतना अभियान ।
जनचेतना अभियान शुरु गरिए पछी अनिल खनाल र नेपाल मदर सँग फोन गरेर, भेटेर, मेसेज पठाएर हामीलाई त बर्बाद पारे हजुर के गर्ने होला ? भन्दै प्रश्न गर्ने पीडितहरुको सँख्या हजार नाघेको छ । नेपाल मदर डट कम र ब्यक्तिगत रुपमा म इन्स्योरेन्सको धेरै जानकारी राख्दैनौँ तर हाम्रा श्रोत ब्यक्ती इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनालले यि टिप्सहरु दिनुभएको तपाईंका लागि :
१ - जो जस सँग, जुन कम्पनी सँग, एजेन्टसँग तपाईंहरुले इन्स्योरेन्स लिनुभएको छ सबै भन्दा पहिला तिनलाई कल गर्नुस बोलाउनुस, तपाईंलाई दिइएको जुन इन्स्योरेन्स बाइन्डर छ त्यसको शुरु देखी अन्त्य सम्मका सबै कुराबुझाउन भन्नोस । उसलाई सोध्नुस् मैले अहिले सम्म कती पैसा तिरेँ ? मेरो एकाउन्टमा कती पैसा जम्मा भएको छ ? यदी मैले आज सरेन्डर गरेँ भने मैले कती फिर्ता पाउँछु ?? एक्कुमुलेट भ्यालु होइन क्यास भ्यालु कती मेरो हात मा पर्छ सोध्नुस् ।
यो भन्न नभुल्नुस् - मलाई अनुमानित डाटा होइन ग्यारेन्टी पार्ट मात्र देखाउ । लङ टर्म, सर्ट टर्म दुबै । भोली कम्पनी फाईदामा गए हामीले यती दिन्छौँ भन्ने छन त्यो कुरा होइन मैले ग्यारेन्टी कती पाउँछु यो सोध्नुस् । आज पाउने अथवा बिस देखी पच्चिस बर्ष पछी पाउने ग्यारेन्टी भ्यालु कती हो ?? अनी मैले सरेन्डर गर्दा बिभिन्न नाममा कती फि र शुल्क काटिन्छ ? त्यो पनि सोध्नुस् । बर्सेनी मेरो उमेर बढ्दै जाँदा
मेरो कस्ट अफ इन्स्योरेन्स कुन दरले बढ्दै जान्छ ?? सोध्नुस् । मेरो कती जम्मा भएको छ भन्दा धेरै बताउने तर मैले पोलिसी क्यान्सिल गर्छु, सबै गरेर नेट क्यास कती आउँछ आज भनेर सोध्नुस, हो त्यहा उनिहरुले ट्रिक गर्छन् र भन्छन - सरेन्डर चार्ज यती, फि यती, सब कटाउँदा सके जिरो नत्र निकै थोरै पो आउँछ भनेर बताउने छन । लिखित रुपमा माग्नुस ।
" नेपाली र भुटानी मुलका नेपाली समुदायलाई इन्स्योरेन्सबाट हुने ठगीबाट सचेत गराउने अभियान "
, Email - anil.khanal@yahoo.com , visit www.nepalmother.com too.